Rostselmash wuxuu ku soo bandhigi doonaa nidaamyada miraha wax lagu gooyo ee AGROSALON 2020 - Nidaamka Baradhada
в Injineerinka / Teknolojiyada
Bandhigga AGROSALON-2020, warshadda Rostselmash waxay ku tusi doontaa dhowr nidaam oo elektiroonig ah kaas oo ay ku qalabeysan yihiin harkabiyaha aan duuliyaha lahayn ee shirkadda.
Intii lagu guda jiray ololaha goynta sanadkan, tijaabooyinku waxay ka bilaabmeen TORUM oo ay weheliso nidaamyada 'autopilot system' oo ku saleysan tikniyoolajiyadda sirdoonka ee macmalka. Xalalkani waxay si weyn u hagaajin karaan saxnaanta mashiinada beeraha, tayada hadhuudhka hadhuudhka iyo tiro kale oo cabbirro kale ah. Thanks to this, "nidaamyada caqliga leh" ee isku darka xakameynta harvester waxay kordhiyaan wax soo saarkooda ilaa 15%.
Sida loo diyaariyo rusheeyahaaga xilliga qaboobaha
Rostselmash waxay soo saartay waxsoosaarka goos goosad bilaa duug ah oo qayb ka ah mashruucan hal-abuurka ah "Beeraha Beeraha ah", oo loogu talagalay in lagu kordhiyo heerka qalabaynta beeraha.
Sida laga soo xigtay soo saaraha, TORUM isku-darka goosadaha ee ay gacanta ku hayaan sirdoonka macmalka ah wuxuu awood u leeyahay inuu u hoggaansamo dhabbaha hore loo sii qorsheeyay ee dhaqdhaqaaqa oo sax ah 10 cm Autopilot-ka ayaa kaligiis ogaada caqabadaha, ka dib markaa wuxuu joojiyaa mashiinka wuxuuna ku wargeliyaa hawlwadeenka xaaladda. Nidaamka RSM Explorer Plus, oo ku saleysan nidaamyada aragtida mashiinka, ayaa mas'uul ka ah xallinta dhibaatadan. Shaqadeeda waxaa ka mid ah xakamaynta madaxa, kor u qaadista tooska ah ee madaxa ka hor intaan la hirgelin iyo ku soo noqoshada booska shaqada.
RSM Router software-ka iyo isku xirka dhismaha ayaa gacan ka geysanaya dhisida wadada ugu wax ku oolka badan dhaqdhaqaaqa isku-dhafka ah ee duurka. Way adagtahay in la xaliyo dhibaatadan xitaa isku darka khibrad leh marka loo eego garashada macmal. Thanks to Automation, xaddiga hadhuudhka luminta ayaa la yareeyay, goosashada waxaa loo sameeyaa si sax ah waqtigii loogu talagalay, waxqabadka isugeynta ayaa kordhisa 15-20%.
Algorithms-ka kaas oo nidaamka RSM Router uu ku saleysan yahay, markii la xisaabinayo jiritaanka ugu habboon ee dhaqdhaqaaqa mashiinka, tixgeli astaamaha aag gaar ah iyo dalaga ku koraya.
RSM Optimax block wuxuu siiyaa isku darka hawlwadeenka dejimaha kaasoo hubin doona hufnaanta ugu badan ee mashiinka marka loo eego xaaladaha hadda jira, tusaale ahaan, xaaladaha cimilada - heerkul gaar ah, qoyaan, iwm. Macluumaadka ku saabsan qaab dhismeedka sirdoonka macmalku u arko inay fiicantahay ayaa lagu soo bandhigay qaab wadahadal ah. daaqadaha shaashadda kombuyuutarka dul saaran. Xaaladdan oo kale, doorashada ugu dambeysa ayaa weli la sii shaqeyneysa: waa inuu xaqiijiyo isbedelada si ay u dhaqan galaan.
Xaraashka TORUM wuxuu isku ururiyaa xogta laga helo dareemayaal kala duwan. Tusaale ahaan, aaladaha dareemayaasha ee lagu rakibay miraha wax lagu dubo ayaa la socda heerka buuxista. Haddii ay dhaafto 25%, Nidaamka Xakamaynta Heerka ma u oggolaan doono inuu xidho. Tani waxay ka ilaalin doontaa xajiyeyaasha dhismayaasha silo wixii waxyeelo u leh walxaha.
Xogta kale ee ay ku shaqeyso otomaatigga waxaa ka mid ah wax soo saar, sicir buuxa, iwm Waxay cabirtaa goosashada meel kasta oo ka mid ah berrinka waxayna soo saartaa khariidado waxsoosaar iyo qoyaan. Xogtan waxaa lagu gudbiyaa marinka GSM ee loo yaqaan 'agrotronic computer platform', kaas oo iyaga ugu muuqda qaab khariidado ah. Waa la daawan karaa wakhti kasta ama waa la soo dejisan karaa si loo falanqeeyo. Waa qalab wax ku ool ah oo loogu talagalay maaraynta bacriminta iyo codsiyada kale. Tusaale ahaan, marka waxsoosaarku isbedelo, otomaatigga ayaa si otomaatig ah dib ugu xisaabiya waqtiga iyo goobta laga dajinayo hadhuudhka, ka dib markaa wuxuu macluumaadkan u dirayaa wadayaasha baabuurta xamuulka qaada ee geedaha u soo saara berrinka. Rostselmash ayaa soo warisay in xalkaani ka takhalusi doono gawaarida gawaarida gawaarida berrinka dhexdeeda ah isla markaana wuxuu xoojinayaa saadka 25%
Nidaamka isteerinka RSM AutoDriver wuxuu caawiyaa isteerinka si iskumid ah oo isbarbar dhiga kii hore. Nidaamku wuxuu ku qaataa shaqada loo maro Agrootonka, oo ay kujirto adeeg loogu talagalay sixitaanka kala duwan ee cinwaanka gaariga. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku meeleyso dhirtu meel kasta oo adduunka ah oo leh sax ah 2,5 cm.
Waxay kuxirantahay culeyska saaran mootada, guriga quudiyaha, qalabka wax lagu tumo, rotor iyo heerka qasaaraha, RSM AutoCrop wuxuu si otomaatig ah u hagaajiyaa xawaaraha goosashada. Ujeeddadeedu waa in lagu bixiyo socod deggan barta laga galo qalabka wax lagu tumayo iyo kala sooca. Tan awgeed, hadhuudhka iyo nadiifinta waxaa lagu sameeyaa khasaaro ugu yar.
Xawaaladda TORUM ee aan duuliyaha lahayn waxay kordhisaa hufnaanta hadhuudhka, waxay naaqusaysaa culayska saaran mashiinnada waxsoosaarka beeraha waxayna u qaadataa nabadgelyada dalaga heer cusub.
Bandhigga AGROSALON waxaa lagu qaban doonaa laga bilaabo Oktoobar 6 illaa 9, 2020 magaalada Moscow, xarunta bandhigga caalamiga ah ee Crocus Expo.
AGROSALON waa rasmi ahaan mid ka mid ah soo bandhigga ugu ballaaran ee caalamiga ah ee mashiinnada wax soo saarka beeraha waana bandhiga kaliya ee ka socda Russia ee ku soo bandhigaya wax soo saareyaasha dunida ugu warshadeeya mashiinada beeraha hal goob.
Tags: Agrosalon 2020Оссельмаш
Natiijooyinka bandhigga AGROSALON 2020
Majaladda Nidaamka Baradhadu waa kaqeybgaleha bandhigga 'AGROSALON'!
Waqtiga ganacsiga! Barnaamijka ganacsiga waxaa lagu daabacay bogga bandhigga ee AGROSALON
U hel tikitkaaga nasiib nasiib AGROSALON!
Qalabka beeraha ee AGROSALON 2020
Barkimooyin, ubaxyo, miro caano leh, iyo caarada hadhuudh. Cayayaanka sareeya ee xilli-sanadka 2020
Warshad khudaarta ka sameysan ayaa ka soo muuqan doonta Term Territory
Maqaalka xiga ee daabacaadda joornaalka "Nidaamka baradhada" ayaa loo diyaarinayaa sii deyntiisa